Williams falls short of ton as Zimbabwe frustrate Bangladesh - Worldnews.com
Williams falls short of ton as Zimbabwe frustrate Bangladesh
The first Test between Zimbabwe and Bangladesh is in the balance after a first day on which Sean Williams fell 12 runs short of a century.
Williams was the star of the show for the tourists in Sylhet, the left-hander steadying the ship for Zimbabwe after they slumped to 129-4.
Captain Hamilton Masakadza scored
Bangladesh v Zimbabwe Scoreboard
SYLHET, Bangladesh (AP) - Scoreboard Sunday at stumps on the second day of the first cricket test between Bangladesh and Zimbabwe at Sylhet International Cricket Stadium:...
Chatara, Sikandar put Zimbabwe on top in first Test
SYLHET: Pace bowler Tendai Chatara and spinning all-rounder Sikandar Raza claimed three wickets each to put Zimbabwe on top in the first Test against Bangladesh in Sylhet...
SYLHET, Bangladesh: Pace bowler Tendai Chatara and spinner Sikandar Raza claimed three wickets each to put Zimbabwe on top in the first Test against Bangladesh in Sylhet on...
SYLHET, Bangladesh: Sean Williams and skipper Hamilton Masakadza slammed a fifty each as Zimbabwe made 236-5 on the opening day of the first Test against Bangladesh in...
aSYLHET, Bangladesh: Sean Williams and skipper Hamilton Masakadza slammed a fifty each as Zimbabwe made 236-5 on the opening day of the first Test against Bangladesh here...
Sean Williams and skipper Hamilton Masakadza slammed a fifty each as Zimbabwe made 236-5 on the opening day of the first Test against Bangladesh in Sylhet on Saturday....
Sean Williams and skipper Hamilton Masakadza slammed a fifty each as Zimbabwe made 236-5 on the opening day of the first Test against Bangladesh in Sylhet on Saturday. Williams topscored with 88 off 179 balls after Masakadza hit 52 in his 105 ball knock to lay the initial foundation for Zimbabwe at the Sylhet International Cricket Stadium, which was hosting its maiden Test....
1st Test: Chatara, Raza put Zimbabwe on top against Bangladesh
SYLHET (Bangladesh): Pace bowler Tendai Chatara and spinner Sikandar Raza claimed three wickets each to put Zimbabwe on top in the first Test against Bangladesh in Sylhet on Sunday. Chatara claimed 3-19 and Raza grabbed 3-35 as Zimbabwe bowled out the hosts for 143 runs after left-arm spinner Taijul Islam took 6-108 to end the visitors' first innings on 282 in the morning....
Zimbabwe, Bangladesh share early honours on Sylhet’s Test debut
SYLHET: Sean Williams and skipper Hamilton Masa­kadza slammed a fifty each as Zimbabwe made 236-5 on the opening day of the first Test against Bangladesh here on Saturday. Williams top-scored with 88 off 179 balls after Masakadza hit 52 in his 105 ball knock to lay the initial foundation for Zimbabwe at the Sylhet International Cricket Stadium, which was hosting its maiden...
Bangladesh vs Zimbabwe, 1st Test: Chatara, Raza put tourists on top at stumps of Day 2
Pace bowler Tendai Chatara and spinner Sikandar Raza claimed three wickets each to put Zimbabwe on top in the first Test against Bangladesh in Sylhet on Sunday. Chatara claimed 3-19 and Raza grabbed 3-35 as Zimbabwe bowled out the hosts for 143 runs after left-arm spinner Taijul Islam took 6-108 to end the visitors' first innings on 282 in the morning. Zimbabwe, who pocketed a...
Tendai Chatara claimed 3-19 and Sikandar Raza grabbed 3-35 as Zimbabwe bowled out the hosts for 143 runs after left-arm spinner Taijul Islam took 6-108 to end the visitors’ first innings on 282 in the morning. cricket Updated: Nov 04, 2018 18:12 IST Agence France-Presse Sylhet Pace bowler Tendai Chatara and spinner Sikandar Raza claimed three wickets each to put Zimbabwe on top...